हाम्राे पिपलबाेट » दोस्रो लहरको जहर दोस्रो लहरको जहर – हाम्राे पिपलबाेट
करीब चार साताअघि काठमाडौमा दाइसँग कुरा गरेको थिएँ । प्रसङ्गमा यसपालीको गुठी, जात्रा मनाउने कि नमनाउने भन्ने विषयमा मैले भनेको थिएँ – इन्डियाको हावा राम्रो छैन, जे गर्नु छ यही दुई साताभित्रै गर्नुहोस् त्यो पनि छोटकरीमा । दाइ त “कन्भिस” हुनु भयो तर अरू भए कि भएनन् थाहा भएन। तर, जात्रा लाइभ हेरिरहेँ, आस्थाले शिर झुके पनि त्यो भीडमा कहीँ कतै कोरोना पनि रमाइरहेको भान भयो ।
यसैगरी सामाजिक संजालमार्फत कोरोना संक्रमणको सम्भावित दोस्रो लहरको संकेत गरेको थिएँ । कतिपयले त्रास फैलाउने आराजक तत्त्वसमेतभने तर मलाई कुनै गुनासो छैन । पोहर संक्रमणले दस्तक दिनुभन्दा धेरैअघि नै २०७६ साल माघ र फागुन महिनामै दुई लेखमा कोरोनाकोसम्भावित ताण्डवको ‘ट्रेलर’ जारी गरेको थिएँ । कोरोनाको कहर भोग्नेलाई थाहा छ, देख्नेको आँखा सुकेको छ । जसलाई संक्रमण भएन तिनलेयो केही हैन विकसित देशको हौवा, जनताको सिनो लुछ्ने स्वाथ्य माफिया, कौवा आदि इत्यादि भन्दै हिँडे । घरघरमै डाक्टर वैद्य झाँक्री जन्मे । देशका मुखिया नै विज्ञान र अनुसन्धानविनाको ‘प्रेस्किप्सन’ बाँडेर निमुखालाई बेसारे सपना अम्बाको पातमा हालेर दिँदै रमाए । यसभन्दा कहालीलाग्दो विपना के होला र हाम्रा लागि ?
भ्याक्सिन रामवाण हैन न त अर्जुनवाण नै हाे । भ्याक्सिन कुनै प्रकारको ओखती हैन । भ्याक्सिन मूलतः भाइरस नै हो । साधारणतया ३ प्रकारले भ्याक्सिन बनाइन्छ – १. कमजोर बनाइएको वा दाँत झिकिएको ज्युँदो भाइरसबाट २. मृत भाइरसबाट ३. भाइरसको आरएनए प्रयोग गरेर ।
अर्को भ्रम छ – भ्याक्सिनको प्रतिप्रभाव (साइड इफेक्ट)बारे । साइड इफेक्ट नभएको त सायद कुनै ओखती वा खाना नै नहोला । मुख्य कुरा यसले दिने फाइदा कति छ भन्ने हो । हालसम्म विश्वभर ४० करोडभन्दा बढीले भ्याक्सिन लिइसके र साइड इफेक्टको कारण अस्पताल भर्ना हुनु परेकाको संख्याकेही हजार छन् भने मृत्यु त नगन्य मात्रामा भएकाे छ । तर, भ्याक्सिनको प्रयोगले कति मान्छे मृत्युको मुखबाट बाँचे ? कतिलाई सर्न / सार्नबाट जोगाए? यी पाे महत्त्वपूर्ण सवाल हुन् त । त्यसभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ भाइरस दाेहाेरिन (रिप्लिकेट) हुन पाउँदैन र नयाँ नयाँ प्रकार (भेरियन्ट) बन्नबाट रोकिन्छ । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा खोप लगाउनु नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कदम हो कोरोनाविरुद्धको यो विश्वयुद्धमा । कालान्तरमा त एन्टिभाइरल औषधि बन्ला नै ।